Vaovao - Maninona no sarotra ny mamerina ny fonosana kosmetika?
Amin'izao fotoana izao, 14% fotsiny ny fonosana plastika eran'izao tontolo izao no voaverina - 5% fotsiny amin'ireo fitaovana no ampiasaina indray noho ny fako ateraky ny fizarana sy ny fanodinana. Ny famerenana indray ny fonosana hatsaran-tarehy dia matetika no sarotra kokoa. Nanazava i Wingstrand: “fonosana marobe ny fonosana maro, ka sarotra ny mamerina azy.” Ny lohan'ny paompy dia iray amin'ireo ohatra mahazatra, matetika vita amin'ny plastika sy loharano alimo. "Ny fonosana sasany dia kely loatra ka tsy afaka maka fitaovana ilaina."
Arnaud Meysselle, talen'ny fahefana REN Clean Skincare, dia nanasongadina fa ny orinasa mpanao hatsarana dia manana olana amin'ny fitadiavana vahaolana mety satria miovaova be erak'izao tontolo izao ny toerana fanodinana. "Mampalahelo fa na dia azo averina alamina tanteraka aza ny fonosana, ny tsara indrindra dia 50% ihany no azo averina namboarina," hoy izy tamin'ny resadresaka nifanaovana taminay tany London. Noho izany, ny fifantohan'ny marika dia nifindra avy amin'ny fonosana azo averina ho fonosana plastika voaverina. "Farafaharatsiny mba tsy hanao plastika virijina."
Rehefa avy nilaza an'izany izy, ny REN Clean Skincare dia lasa marika fikolokoloana hoditra voalohany nampihatra ny teknolojia Infinity Recycling amin'ny vokatra sonia Evercalm Global Protection Day Cream, izay midika fa ny fonosana dia azo averina miverimberina amin'ny alàlan'ny fanafanana sy fanerena. "Ity plastika ity dia mirakitra fitaovana fanodinana 95%, ary ny miavaka sy ny mampiavaka azy dia tsy mitovy amin'ny plastika virijina," hoy i Meysselle nanazava. "Ny lakileny dia azo averina alamina mandritra ny fotoana tsy voafetra izy io." Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny plastika dia tsy azo averina indray mandeha na indroa fotsiny.
Mazava ho azy, ny teknolojia toy ny "Infinity Recycling" dia mbola mitaky fonosana hiditra amin'ireo fotodrafitrasa mety hamboarina indray. Ny marika toa ny Kiehl's dia mandray andraikitra amin'ny fanangonana fonosana amin'ny alàlan'ny programa fanodinana ao amin'ny magazay. "Noho ny fanohanan'ny mpanjifanay dia nanamboatra fonosana vokatra 11,2 tapitrisa eran-tany izahay hatramin'ny 2009. Manolo-tena hanamboatra fonosana 11 tapitrisa indray izahay amin'ny 2025," hoy ny talen'ny global Kiehl Leonardo Chavez nanoratra tamin'ny mailaka avy tany New York.
Ny fanovana kely eo amin'ny fiainana dia afaka manampy amin'ny famahana ny olan'ny fanodinana ihany koa, toy ny fananganana fitoeram-pako fanary any amin'ny trano fidiovana. "Matetika, iray ihany ny fitoeram-pako ao amin'ny trano fandroana, ka samia mametraka ny fako rehetra," hoy i Meysselle. “Heverinay fa zava-dehibe ny famporisihana ny olon-drehetra hamerina ao anaty trano fidiovana.”
Kaontenera vovoka kosmetika miaraka amin'ny sivana, Kaontenera fanosotra kosmetika, Fonosana kosmetika vita amin'ny tavoahangy, Tavoahangy fanosotra kosmetika, Polonina tavoahangy mainty, Tavoahangy fanosotra amin'ny maso,